GPS Navigation dia lavitra - VAOVAO
fanontaniana GPS Navigation dia lavitra - VAOVAO
1 taona 10 volana lasa izay - 1 taona 8 volana lasa izay #521 by Gh0stRider203
Nahatsikaritra aho Izany dia midika hoe manao izany matetika kokoa kely eto tato ho ato. Tsy nanao izany teo anatrehan'i 2017 ......
Azonao atao ny mahita ny lalana aho tokony ho nandray, dia avaratr'i fotsiny izany, ny lalana ho any DFW, ary avy eo ny lalana ho any LFRG CURRENT, avaratr'i izany.
Aho amin'ny fatiantoka noho ny antony manao izy. Indraindray dia mety hanidina Ho lalana sy miverina im-betsaka tsara, ary avy eo dia misy fotoana toy izany Tsia! TSY manao izany .....
Ny fipetrahana amin'ny DFW efa akaiky tonga lafatra. tsara ny teboka, ary ny fidinana taham--.37 ft / seg amin'ny touchdown (any aloha dia saro-piaro .... LOL)
Na iza na iza nahazo na inona na inona?
1 taona 10 volana lasa izay #524 by Dariussssss
Eny ary, misavorovoro ny zavatra ianao.
Ve ianao na inona na inona momba ny Tinker lalana, rehefa hanala? I book nataonao, FSX dia mikorontana ny sidina iray manontolo drafitra, ary tena matetika no hamerina ny fiaramanidina ho any amin'ny lalana voalohany-teboka. Na, mifamadika ny HDG fomba fa tsy GPS / FMC. Izany no mahatonga ahy hijery mijery sy avo roa heny ny lalana mba ho azo antoka tsy misy fahadisoana na ny adala na mifandimby tahaka azy na inona na inona.
1 taona 10 volana lasa izay #526 by Gh0stRider203
LOL Tsia. Tsy manova na inona na inona raha tsy maintsy mifamadika avy VFR mba IFR noho ny toerana ho IFR ary amin'izay fotoana izay dia, efa any aho nifandray tamin'ny tilikambo.
Tsy mipetraka sy mibanjina lava FSX nandritra ireo sidina. I manao zavatra hafa, toy ny kilalao World ny sambo mpiady (izay aho amin'izao fotoana izao manao LOL)
1 taona 10 volana lasa izay #527 by Dariussssss
... dia nisy vitsivitsy '' noho ny kamory '' sidina, raha ny marina tena ela iray KPHX-LYBE sy ny fiaramanidina dia toerana eo, toerana tsara tokony ho izy. Dia tsy afaka manao sidina iray manontolo avy hatrany, noho izany dia nanao izany ho faritra vitsivitsy. Voavonjy amin'ny fotoana iray ary nanohy rehefa hahazo ny fotoana. Tahaka hoy izaho: fa mamantatra on.
Afaka ho anao ny handefa ahy izany sidina drafitra? (FB na ny e-mail) dia miezaka ny manao izany. Iza fiaramanidina mampiasa ity iray?
1 taona 10 volana lasa izay #528 by Gh0stRider203
tsy tokony izany no olana ......
Hataoko KDFW - LFRG ao amin'ny 747-400LCF noho ny zava-misy fa ny manakaiky ny Max isan-karazany, dia somary mora fomba (rehefa mahazo piaramanidina 12 LOL), ary vokatr'izany, dia manao ny tena vola ho an'ny VA ity sidina .
Aho Zip iray mifatotra amin'ny 3 rakitra drafitra ampiasaiko.
KDFW - LFRG VFR ny piaramanidina 12 & 30, ary IFR ny piaramanidina 30
Anaran'ny fisie: KDFW-LFRG.zip
1 taona 10 volana lasa izay #529 by Dariussssss
OK. Dia hataoko izany somary hafa kely, miaraka amin'ny 747ERF ara-dalàna.
Tena Tena hafahafa ny ahy mba hanao toy izany sidina amin'ny VFR ... Angamba izay no misy ny fahadisoana dia ... Na izany aza, eo no hizahako toetra azy.
1 taona 10 volana lasa izay #531 by Gh0stRider203
99.999% ny ny sidina dia VFR sy KDFW - LFRG no hany lalana no manana izany olana. Tsy tiako IFR. Aho hoe inona no hevitra hanao IFR in VFR andro, raha vao iany ianao hanafoana izany ihany rehefa avy maka-eny?
1 taona 10 volana lasa izay #532 by Dariussssss
99.999% ny ny sidina no IFR, miaraka ATC, na dia ny manelingelina tahaka ny helo, fa hanao ny tsara indrindra mba hitandrina izany ho zava-misy araka izay azo atao.
Hatreto dia tsara, ny fiaramanidina eo amin'ny lalana marina.
1 taona 10 volana lasa izay #533 by Gh0stRider203
Te hanao izany .... fa Tiako ny hatory Handefa anareo aho manampy ny ora
Nahoana aho no manidina be? tsara fa iray .... Izao no natao aho hatramin'izao tamin'ny volana Aprily.
Faharoa, izaho irery no manidina amin'izao fotoana izao ho an'ny VA, ary amin'izao fotoana izao dia $ ny vola lany amin'ny leasing 961,250 fandoavam-bola isam-bolana ho an'ny 2 Pax vorona (na dia 777-200LR), ary 1,258,334 $ isam-bolana ho an'ny 2 entana (747 -800F).
Tena miakatra atỳ amiko mba hahazoana antoka isika hampiditra ampy isam-bolana mba handrakotra izany ary manao ny $ ilaina mba handoavana azy ireo eny.
1 taona 10 volana lasa izay - 1 taona 10 volana lasa izay #534 by Gh0stRider203
Dia nanao araka ny 300K nm tamin'ny volana lasa, ary Andriamanitra no mahalala ny fomba ora maro LOL
Tena azo inoana fa tsy asa iany ho anareo. Tsy foana manao izany ho Ahy. Tena tanteraka kisendrasendra
Last edit: 1 taona 10 volana lasa izay Gh0stRider203.
Fotoana mamorona pejy: 0.280 segondra